रक्तदान गर्दा केही हानी हुन्छ ? यस्तो छ भ्रम र सत्य – NawalpurTimes.com
प्रकाशित : २०७७ भदौ ८ गते १८:४२
हामीले सुन्ने गरेका छौं, रक्तदान जीवनदान । रक्तदान गर्नु पुण्यको काम हो । किनभने हामीले दिएको रगतबाट कसैले जीवन पाउँछ । हामीलाई थाहा भएको यत्ति हो । यद्यपि हामीले रक्तदान कस्तो अवस्थामा गर्न सक्छौं, रक्तदान गरेपछि हाम्रो शरीरलाई फाइदा/बेफाइदा के हुन्छ, हामीले गरेको रगत कहाँ, कसरी प्रयोग हुन्छ ? यावत् जिज्ञासा मेट्नका लागि यो सामाग्री पेश गरिएको छ ।